Qormaata biyyaalessaa Itoophiyaa: Koreen qabxii qormaata &apos;Aptitude&apos; qulqulleessu hundaa&apos;e - BBC News Afaan Oromoo
Qormaata biyyaalessaa Itoophiyaa: Koreen qabxii qormaata &apos;Aptitude&apos; qulqulleessu hundaa&apos;e
Goodayyaa suuraa Qabxiin Aptitude haalaan gadi bu&apos;eera jedhu barattoonni
Barattoonni qormaata seensa yunivarsitii baranaatiin qabxii olaanaa galmeessan tokko tokko qabxii gosa qormaataa &apos;Aptitude&apos; irratti komii dhiyeessaa jiru.
Barattoonni magaalaa Dirre Dhawaa manneen barnootaa qophaa&apos;inaa tokko tokko turaniifi maatiinsaanii gara biiroo barnootaa deemuusaanii himanii, Itti gaafatamtuun biiroo Barnootaa komiisaanii kana qaamaan oggantoota olaanootti akka dhiyeessan BBC&apos;tti himaniiru.
Barattuun Mana Barnootaa qophaa&apos;inaa Beezaa taate, BBC&apos;tti komiishee himte waan jettu, qabxii gosa barnootaa walii galaa galmeessite irrattis komii qabbaattus kan Aptitude garuu baayyee kan eegdeen gadi ta&apos;u dubbatti.
&apos;&apos;Kan kiyya 100 keessaa 35 yoo ta&apos;u kan hirriyoota kiyyaa 20 fi isaan gadi&apos;&apos; jechuun qabxii barattoota qormaata waliigalaatiin 400 fi isaan olii galmeessan eeruun garaa garummaasaa dubbatti.
Barattoonniifi maatiin biiroo Barnoota Dirre Dahwaatti argamuun har&apos;a komii keenya dhiyyeeffannees maatiifi barrattoota manneen barnootaa qophaa&apos;iinaa Rootitodaam, Bisiraata Gabreel, fi Beezaa ta&apos;usaanii baruun danda&apos;ameera.
Qabxiin Aptitude ishees kan eegdeen gadi ta&apos;u himtee, &apos;&apos;barataan Aptitude dhaan badhaafamaa turan dabalatee qabxii gadaanaa galmeessan.
Barataan tokko attamiin 100 keessaa 6, 7, ykn 0 galmeessuu danda&apos;a?&apos;&apos; jechuun gaafatti.
&apos;&apos;Qophiin ani qormaatichaaf taasiseen yoo wali bira qabamee ilaalamu, qabxiin argadhe gonkumaa wal hingitu,&apos;&apos; jechuun komiishee BBC&apos;tti himte.
Goodayyaa suuraa &apos;&apos;Barattoonni komii qaban kamuu dhuunfaan dhiyeeffachuu danda&apos;u&apos;&apos; jedhu Aabba Arayaan
Hojii gaggeessaan Ejjansii Qormaataafi Madaallii Barnoota Biyyaaleessaa Obbo Arayaa Gabra Igzaabeer gama isaanitiin, komii barattoonni dhiyeeffatan dhagahuusaanii BBC&apos;tti himuun, haala kana qulqulleessuuf koreen tokko hundaa&apos;uus dubbataniiru.
Amma keessummeessaa jirra kan jedhan Aabba Arayaan, barattoonni komii qaban kamuu dhuunfaan dhiyeeffachuu akka danda&apos;an dubbataniiru.
Qabxichi karaa intarneetiin kan gadhiifameef, namuu ilaaluun komii qabu dhiyeeffachuu akka danda&apos;uufi kan jedhan Obbo Arayaan, kan dhumaa kan ta&apos;u qabxii isa waraqaatti maxxanfamee keennamu ta&apos;uu ibsu.
Kanaafuu komiisaanii qaamaan, karaa bilbilaa, yoo ta&apos;u baate ammoo, marsariitii irratti dhiyeeffachuu akka danda&apos;amu nutti himaniiru.
Namni komii dhiyeeffatus lakkoofsa addaa qormaataa (Registration Number) fi gosa barnootaa guutuun gaaffii osoo dhiyeesseef maxxansa waraqaa ragaatiin dura keessummeeffamuu danda&apos;a jedhaniiru.
Qabxiin seensa Yunivarsiitii ykn kutaa 12ffaa kaleessa -Kibxata ifa ta&apos;uu Ejensiin Qormaataafi Madaallii Barnootaa beeysiseera.
Barattoota qoraman keessaa barattoonni harka 48.59 tahan qabxii 350 ol fidaniiru. Qabxiin barattoota 68&apos;s seera kan hin hordofne waan taheef guutummaatti haqamuunsaas gabaafameera.
marsariitii app.neaea.gov.et seenuun Lakkoofsa Galmee (Registration Number) keessanii galchuun &apos;Go&apos; jechuun isinii fida.
Kana malees barattoonni qabxii qormaata isaanii karaa ergaa gabaabaa 8181 ilaaluus danda&apos;u jedhameera.
Qabiyyee iddoola alaatiif BBC&apos;n itti hin gaafatamu